တင်ဒါရလဒ်များ RayHaber | raillynews
[26 / 02 / 2020] ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်သောနာနိုနည်းပညာနှင့်အတူ Burulas ကိရိယာများသည်ပိုးသတ်ဆေး	16 Bursa
[26 / 02 / 2020] Derbent နှင့်Köseköyရထားဘူတာများဖွင့်ရမည်	41 Kocaeli
[26 / 02 / 2020] အာရုံစူးစိုက်မှု Uludag ရန်ကေဘယ်လ်ကားပိတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်	16 Bursa
[26 / 02 / 2020] YHT လေ့လာရေးခရီးများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများအတွက်အထူးလျှော့စျေးရယူပါ	06 တူရကီ
[26 / 02 / 2020] Eskisehir သည်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထား ၂၀၂၀ ကိုပြုလုပ်သည်	26 Eskisehir
မီးရထားလမ်း၊ လမ်းနှင့်ကေဘယ်ကြိုးကားများတင်ဒါသတင်းများ၊ သတင်းလွှာများ၊ ကြေငြာချက်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စာချုပ်များကိုယခုရထားလမ်းတင်ဒါရလဒ်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
Çayırdere Sinekli Kurfallı Kabakça İstasyon Yollarının Yenilenmesi İşi İhale Sonucu T.C Devlet Demiryolları İşletmesi TCDD 1. Bölge Malzeme Müdürlüğünün (TCDD) 2019/659437 KİK numaralı yaklaşık maliyeti 7.019.391,01 TL olan Çayırdere Sinekli [ပို ... ]
Savronik Elektronik A.Ş. အား yearszmir Metropolitan Municipality မှငါးနှစ်ကြော်ငြာများဖွင့်လှစ်သောဘတ်စ်ကားများ၊ မှတ်တိုင်များနှင့်လွှဲပြောင်းစင်တာများအတွက်တင်ဒါရရှိခဲ့သည်။ ဝမ်။ ESHOT ကိုပေါင်သန်း ၆၀ ပေးရမည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ် ESHOT အထွေထွေ [ပို ... ]
Balikesir Müsellesဘေးထွက်လမ်းလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် TC ပြည်နယ်မီးရထားလုပ်ငန်း TCDD 3၊ ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူစတော့အိတ် Ctrl ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 2019/638987 KIK ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ၈၄၁.၀၃၂၊ ၃၂ TL ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Kayaş Kayseri စီမံကိန်းအကြားတွင်ရထားလမ်းကို ဖြတ်၍ စွမ်းအင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုင်း ၄ ခုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းတင်ဒါရလဒ်တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလုပ်ငန်း TCDD ဒုတိယအကြိမ်အိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 4/2 [ပို ... ]
Irmak Zonguldak လိုင်း Km: ၃၅၅ + ၀၅၅ မှ ၃၅၅ + ၃၀၀ ကွန်ကရစ်တိုင်နံရံနှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း TCDD ၏တင်ဒါရလဒ် ၂။ ဒေသတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 355/055 [ပို ... ]
Ankara Kayseri လိုင်းကီလိုမီတာ - ၃၁ + ၅၄၆ (မီးရထားသို့) လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်တင်ဒါရလဒ် TCDD ဒုတိယအကြိမ်ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်သည် 31/546 KIK ဖြစ်ပြီး ၁.၁၅၅.၉၆၆,၁၄ TL ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Ankara Kayseri လိုင်းကီလိုမီတာ - အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ၄၃ + ၆၀၀ (မီးရထားအထိ) တင်ဒါ TC ပြည်နယ်ရထားလမ်း၏ရလဒ် TCDD ဒုတိယအကြိမ်ဝယ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 43/600 ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် KIK ၁.၂၆၀.၀၁၈,၁၃ TL [ပို ... ]
Irmak Zonguldak လိုင်း ၇ Hydraulic Culverts ၏တင်ဒါရလဒ်တူရကီအစိုးရမီးရထားတင်ဒါပြီးနောက် TCDD ဒုတိယအကြိမ်ဝယ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 7/2 Irmak, ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် 2019 TL [ပို ... ]
Irmak Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ Km: 370 + 517 (မီးရထားလမ်းကျော်) Overpass လုပ်ငန်းများဆောက်လုပ်ခြင်းတင်ဒါရလဒ်တူရကီသမ္မတနိုင်ငံပြည်နယ်ရထားလမ်း TCDD ဒုတိယအကြိမ်ဝယ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) KIK ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ၈.၀၂၃.၁၅၅၈၈ TL [ပို ... ]
Irmak Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ - TCDD ၏တင်ဒါရလဒ်၏ ၃၇၈ + ၂၂၀ အရမြေအောက်လမ်းဖောက်ခြင်း ၂။ ၂၉.၁၉၉/၄၉၇၀၇ တွင်တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်း၏ ၀ ယ်ယူမှု ၀ န်ဆောင်မှု ဦး စီးဌာန (TCDD) သည်ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်မှာ TIKD ၏နံပါတ် 378/220 ဖြစ်သည်။ Irmak ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Tet4TL ၏ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် Worksetinkaya Divriği၏ TC KD အမျိုးမျိုးရှိအခြေခံအဆောက်အအုံတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ TCDD 2019 ၏တင်ဒါရလဒ်များ၊ ဒေသဆိုင်ရာ ၀ ယ်ယူသိုလှောင်ရေးထိန်းချုပ်မှု ဦး စီးဌာန (TCDD) 594385/9.432.709,77 ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် [ပို ... ]
Ankara-Sivas အမြန်ရထားရထားစီမံကိန်းKayaş-Elmadağအပိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံထောက်ပံ့ရေးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် Ankara-Sivas မြင့်မားသောခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် TL 2020/13055 ပြည်နယ်မီးရထားစီမံခန့်ခွဲမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) ၏ KIK [ပို ... ]
အိန္ဒိယမီးရထားကုမ္ပဏီ Larsen နှင့် Toubro (L&T) Etihat မီးရထားကြီးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတင်ဒါအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏တရားဝင်ရထားလမ်းကုမ္ပဏီဖြစ်သော Etihad Rail သည်ကုန်တင်နှင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစီမံသည် [ပို ... ]
Tatvan Rahova ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် Tatlim Rahova Logistics သည် ၇၁.၅၆၈.၅၂၂.၂ TL နှင့်တူရကီနိုင်ငံမီးရထားလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု (TCDD) ၏ခန့်မှန်းခြေကုန်ကျစရိတ် TL 2019 ။ [ပို ... ]
ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကိုဆန့်ကျင်သောနာနိုနည်းပညာနှင့်အတူ Burulas ကိရိယာများသည်ပိုးသတ်ဆေး
Parkomat လျှောက်လွှာကို Mersin တွင်စတင်ခဲ့သည်
အာရုံစူးစိုက်မှု Uludag ရန်ကေဘယ်လ်ကားပိတ်ပြီးပါလိမ့်မယ်
YHT လေ့လာရေးခရီးများတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများအတွက်အထူးလျှော့စျေးရယူပါ
Eskisehir သည်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမီးရထား ၂၀၂၀ ကိုပြုလုပ်သည်
RayHaber 26.02.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
ဥက္ကဌSeçerက Mersin Metro Project အားကျောင်းသားများအားရှင်းလင်းပြောကြားသည်
တင်ဒါကြေငြာချက် - UIC-60 ကတ်ကြေးများအတွက်အချပ်အိပ်တစ်လုံး ၀ ယ်သည်
10: မတ်လ 11 00 @ - 12: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Seletar ယ်ယူရန် Kontray ပါလိမ့်မယ်
11: မတ်လ 11 00 @ - 12: 00
ဂျီနီဗာကားပြပွဲတွင် BMW i4 Concept ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
Volkswagen 2021 Touareg R ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်